Sabti, Jan 2 , 2021-Madaxweynaha Uganda oo ku eedeeyay mucaaradka dalkiisa iyo dalal shisheeye inay wadaan qorshe lagu qalqal galinayo doorashada bishaan – LaacibOnline
Sabti, Jan 2 , 2021-Madaxweynaha Uganda oo ku eedeeyay mucaaradka dalkiisa iyo dalal shisheeye inay wadaan qorshe lagu qalqal galinayo doorashada bishaan
Wararka Maanta- Sabti, Jan 2 , 2021
Madaxweynaha Uganda oo ku eedeeyay mucaaradka dalkiisa iyo dalal shisheeye inay wadaan qorshe lagu qalqal galinayo doorashada bishaan
Sabti Janaayo, 02, 2021 (HOL) – Xilli uu dalka Uganda isku diyaarinayo doorashada Janaayo 14, ayaa madaxweynaha Uganda ahna taliyaha Guud ee ciidamada qalabka sida, Gen. Yoweri Museveni, wuxuu Maj Gen Kayanja Muhanga u magacaabay madaxa isku duwaha howlaha amaanka ee Kampala.Muhanga wuxuu ahaa abaanduulihii ciidamada Uganda ee Soomaaliya intii u dhaxeysay 2014 & 2016.Madaxweynaha Uganda ayaa sheegay inuu hayo macluumaad ku saabsan in xisbiyada mucaaradka oo ay taageerayaan shisheeyaha, ay qorsheynayaan inay qalqal galiyaan ammaanka dalkiisa iyo doorashooyinka.
Waxaa kale oo madaxweyne Yoweri Museveni uu intaas ku daray in qaar ka mid ah dhalinyaro uu dhowaan la kulmay ay u sheegeen inay jiraan qorshayaal lagu gubayo magaalada Kampala.
Uganda waxay aadeysaa doorashooyin bisha Janaayo. 10 musharax ayaa doonaya inay jagada kala wareegaan madaxweyne Yoweri Museveni.
Museveni ayaa dalkaas soo xukumayay 34-kii sano ee la soo dhaafey. Dadka wax falanqeeya ayaa u arka doorashada inay tahay doorasho adag.
1/2/2021 1:39 AM EST
Sabti Janaayo, 02, 2021 (HOL) -Magaalada Garoowe waxaa ka soconaya kulamo gooni gooni ah oo ay leeyihiin madaxdii ka qeybgasha madashii Aragti -Wadaag oo uu soo qaban-qaabiyay Machadka cilmi baarista Heritage.
1/2/2021 1:25 AM EST
Sabti Janaayo, 02, 2021 (HOL) -War ay soo saartay dowladda Britain ayeey ku sheegtay suuortaganimada in toddobaadyada soo socda uu dalku wajaho xaalad caafimaad tii ugu darrenyd.
1/2/2021 12:58 AM EST
Sabti Janaayo, 02, 2021 (HOL) – Wararka naga soo gaaraya gobolka Gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in diyaaradaha aan duuliyaha laheyn lagu weerarray xarun Idaacadeed oo ay Al-shabaab ku lahaayeen deegaanka Kuunyo -Baroow.
← Sabti, Jan 2 , 2021-Duqeyn diyaaradeed oo lagu weerarray xarun Idaacadeed oo ay leeyihiin Al-shabaab
Sabti, Jan 2 , 2021-Qarax ka dhacay wadada xiriirisa Muqdisho iyo Afgooye →
Axad, July 5 , 2020-Shirkii dowladda federalka iyo dowlad goboleedyada oo baaqday